Kwakatangira: Mumwe Bestseller weiyo "Fomura" Dan Brown | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Fikisheni yesainzi, Vanyori, Novela
Kwakatangira (2017) ndiyo yechishanu sainzi ngano inoverengera ichitamba napamoyo purofesa wezve dzidziso Robert Langdon. Uyu mutambi wekunyepedzera waita kuti Dan Brown ave mumwe wevanyori vanotengesa zvakanyanya nguva dzese. Chete che Iyo Da Vinci Kodhi (2003) anopfuura makumi masere emamiriyoni emakopi akatengeswa kusvika nhasi.
Aya manhamba akamutsa kufarira kwevagadziri vakuru veHollywood. Muchokwadi, ese matatu mafirimu akagadziridzwa anotungamirwa naRon Howard akaiswa nyeredzi neakakunda Oscar mukwikwidzi: Tom Hanks. Hongu OK Kwakatangira Haisi imwe yemafirimu iwayo, kutora kwaro kunogona kungova nyaya yenguva, nekuti iri zita inotounganidza angangoita mamirioni maviri emakopi akatengeswa.
1 Kuongorora uye pfupiso yeiyo Akatangira
1.2.1 Mwari, Gaudí uye zvakasikwa
1.3 Chisarudzo chisingaenderane
2 Ongororo uye maonero
3 Iyo "fomula" Dan Brown
3.1 Robert Langdon, purofesa weyunivhesiti ane mukurumbira
3.2 Kurangana, maguta enhoroondo uye shamwari dzakanaka
3.2.1 Zvisungo zveye-nyeredzi
3.2.2 Mamwe maguta enhoroondo akarondedzerwa mumabhuku ane nyeredzi Langdon
4.1 Kutanga semunyori
Kuongorora uye pfupiso ye Kwakatangira
En Kwakatangira, Dan Brown anosiyanisa mibvunzo yakajairika yemasayendisiti asingatendi kuvapo kwaMwari pamusoro pechiratidzo chekusika, ane kukosha kunodzikira zuva nezuva muzana ramakore reXXI. Kune izvi, munyori weAmerica anoshandisa hunhu hwaEdmond Kirsch, aimbove mudzidzi weLangdon akajeka. Akavaka mhanza yekutenda kune ake matekinoroji zvigadzirwa uye nekushinga kwake kufungidzira.
Yekupedzisira yezviwanikwa Iyo diki tycoon inovimbisa kupindura mibvunzo miviri iyo yakatambudza vanhu kubvira kare prehistoric nguva: "Kwatakabva? Tiri kuenda kupi?". Mhinduro idzi dzaizotsanangurwa pagala paGuggenheim Museum muBilbao uye zvazvinoreva zvinogona kuve zvakakosha kuzvitendero zvikuru zvitatu pasi rese, asi ...
Mavambo (Unganidzo ...
Pamberi chaipo pashoo inotanga, mhirizhonga inoputika pamberi peboka revanhu yevaenzi uye inotepfenyurwa zviripo kumamirioni evatariri kutenderera pasirese. Ipapo zaruriro yechimurenga iri munjodzi yekutsakatika zvachose. Nekudaro, Langdon naVidal vanotanga mujaho wekupererwa wekutsvaga password iyo inopa mukana kuKirsch's enigma.
Mwari, Gaudí uye zvakasikwa
Ivo protagonists vanosvika muBarcelona, ​​uko Gaudí dhizaini inogona kuve yakakosha mune fungidziro dzevechidiki mamirionea nezve sainzi nemasikirwo. Sezviri pachena, Mwari nesainzi vanogarisana pakati pemiti, mhuka nemainjiniya ezvemudenga izvo zvinodzora mabheseni nemakoramu eKathedral yeLa Sagrada Familia.
Dzimwe nzvimbo muguta reCatalan dzakanyatsotsanangurwa naBrown mu Kwakatangira ndivo Guggenheim neCasa Milà. Kunyange zvakadaro, Izvo zvakakosha kuti utaure kuti tsananguro dzeSpanish nzanga nehurumende zviri kure kwazvo kubva parizvino. Munyori weNorth America anoratidza Spain senyika inonamata zvakanyanya uye inoremerwa nefosi yekuchengetedza yeFrancoism.
Uchenjeri hwokugadzira hwakagadzirwa naKirsch pachake hunoratidzika sechikamu chakakura chechirongwa. Mukupedzisira, ruzivo rwejaya mamioneya rwunoratidzwa kune nyika uye rwunotungamira Langdon kufunga nezve basa rezvitendero nhasi.. Kufanotaura kunongedzera kuchinamato chakasarudzika, chekunamata, mukuenderana nemasikirwo uye kufambisa kubatana pakati pevanhu vese.
Ongororo uye maonero
Zvisinei nenhamba dzayo inoshamisa yekunyora, Brown akapomerwa mhosva yekudzokorora mapatani munhoroondo dzake. Vamwe vatsoropodzi vakanyunyuta nezvezvinofungidzirwa zvisirizvo zvezvakaitika uye zvakaumbwa. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Jake Kerridge kubva The Daily Telegraph naMonica Hesse vanobva The Washington Post, vanokanganisa zvakasimba basa reNew Hampshire.
Zvisinei, Brown anotsoropodza maitiro asina kunaka, kutaura zvazviri, anowanzo pindura zvine mutsindo "kune wese mutsoropodzi, ndine chiuru chevaverengi vanofara." Mupfungwa iyi, Janet Maslin kubva The New York Times (2017) inokoka kuverenga Kwakatangira kubva pakuona kuseka geek. Hazvishamisi kuti Kirsh's Tesla mota kunyoresa furemu kushambadza inoti: geeks vachagara nhaka yeNyika ”.
Iyo "fomula" Dan Brown
Robert Langdon, purofesa weyunivhesiti ane mukurumbira
Uyu munhu wekunyepedzera inyanzvi mukufananidzira kwechitendero uye iconography kubva kuHarvard University. Iye murume wepakati nepakati ane hunhu hwakanaka - nekuda kwekugara achishambira - akapiwa izwi rinonakidza kwazvo revakadzi. Iyo zvakare ine ingangoita eidetic ndangariro, inobatsira kwazvo pakuenzanisa zviratidzo uye kugadzirisa zvakavanzika zvakaoma.
Kurangana, maguta enhoroondo uye shamwari dzakanaka
Iye protagonist anogara achiguma achitambudzwa nekutyisidzirwa nerufu nemumwe munhu, sangano kana sangano rakavanzika rine chekuita nechakavanzika chichafumurwa. Pamusoro pezvo, mune imwe neimwe yenyaya mudzidzisi ane rutsigiro rwakakosha rwemumwe akasarudzika, anoyevedza uye akangwara mudiwa. In Kwakatangira, iro basa rinoenderana naAmbra Vidal, director weGuggenheim Museum muBilbao.
Mumanovell ane nyeredzi Langdon, mumwe mukadzi wechikadzi ane humwe hukama hwehukama nechakavanzika chakaongororwa kana ndiye muzukuru wemunhu anokosha munhoroondo. Kwakatangira hazvisi izvo, nekuti Vidal ndiye mukwasha wePrince Julian (ave kuda kutsiva baba vake pachigaro). Iyo yekupedzisira inochengeta zvakavanzika zvepedyo zvakabatana nemupristi anonzi Valdespino.
Mamwe maguta enhoroondo akarondedzerwa mumabhuku ane nyeredzi Langdon
Roma mu Ngirozi neMadhimoni
Paris neLondon mu Iyo Da Vinci Kodhi
Washington DC, mu Chiratidzo chakarasika
Florence, mukati Inferno.
Barcelona, ​​mukati Kwakatangira.
Daniel Gerhard Brown akauya pasi rose neMuvhuro Chikumi 22, 1964 muExeter, New Hampshire, United States. Ikoko akakurira munzvimbo ine dzidziso dzakasimba dzeAnglican pasi pekudzidziswa kwevabereki vake Richard Brown (math math mudzidzisi) naConstance (munyori wenziyo dzinoyera). Zvakare Mutaundi rekumusha kwake, munyori wenguva yemberi akawana dhigirii rake rechikoro chepamusoro kubva kuPhillips Exeter Academy muna 1982.
Ipapo mudiki Daniel akatanga kudzidza mimhanzi uye kurongeka kuAmherts College, imwe yemasangano ane mukurumbira pasi rose. Sechikamu chekuwana diploma yake, Brown akapedza nguva muEurope (España, kunyanya). Mushure mekupedza kudzidza muna 1985, akarekodha dambarefu remimhanzi yevana (SynthAnimals) uye yakavamba Dalliance, kambani yekurekodha.
Dan Brown akatamira kuCalifornia mukutanga kwema1990 achitarisira kuita basa repiyano uye muimbi. Mukufanana, akapa makosi echirungu neSpanish pachikoro chepamusoro cheBeverly Hills kuti azviriritire. Nguva pfupi yapfuura, akanyoresa National Academy yeVanyori, kwaakasangana naBlythe Newlon, aive mudzimai wake kubva 1997 kusvika 2019.
Sezvo zva1993, akatanga kunyora zvakanyanya kushinga; mhedzisiro yacho yaive Dhijitari nhare (Dhijitari nhare) muna 1998, bhuku rake rekutanga. Vakabva vaoneka Ngirozi neMadhimoni (2001) - "kutanga" kwaLangdon - uye Kurangana (2001), pamberi pebasa rekutsaurira raBrown: Iyo Da Vinci Kodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Fikisheni yesainzi » Kwakatangira
Carolina Molina. Kubvunzana nemunyori weLos ojos de Galdós
Mugwagwa waSantiago. Sarudzo yemabhuku uye enganonyorwa